Ny tontolon’ny blaogy Nizeriana – herinandro voalohan’ny Novambra 2005: · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2018 3:02 GMT
Tratry ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalan'izy ireo hankany amin'ny Oniversite Obafemi Awolowo any Ile-Ife avy tany Lagos i Gbenga Sesan sy i Edward avy ao amin'ny Jangbalajugbu Homeland Stores. Niala ny arabe ilay fiara ary nitsambikimbikina imbetsaka, heveriko araka izany fa manam-bitana be izy ireo mbola afaka mandeha na miaina fotsiny aza taorian'izany – noho izany, faly aho fa tsy nisy naninona ianareo.
Derain’ i Timbuktu Chronicles ny asan'i Bunker Roy izay nametraka ny Kolejy Barefoott tamin'ny 1972 niaraka tamin'ny ”faharesen-dahatra fa eo anivon'ny fiarahamonina no isian'ny vahaolana amin'ny olana ambanivohitra”. Ny fanoloran'i Bunker Roy tamin'ilay fivoriana Pop!Tech tany Etazonia vao haingana:
Tsaroan’ i Musings of a Naijaman i Olamide Adeyooye ilay vehivavy tsy hita, ary indrisy, hita faty tao amin'ny Mississippi.
Mitatitra momba ny sarimihetsika vaovao The Bitter Aftertaste, izay mitatitra ny varotra ara-drariny ny Africa Unchained. Antenain'ireo mpamokatra sarimihetsika, WorldWrite, izy io :
Samy mampahatsiahy antsika i Naijablog sy i Nigerian Times fa manamarika ilay famonoana tsy nandalo fitsaràna atao an'i Ken Saro-Wiwa sy ny Ogoni valo ny 10 Novambra.